Bakhala ngendlala abasemigwaqweni - Ilanga News
Home Izindaba Bakhala ngendlala abasemigwaqweni
Bakhala ngendlala abasemigwaqweni
Bathi kabasakwazi ukudayisa ngoba izitolo abathenga kuzona zivaliwe
UNKZ Mbali Nxumalo netafula adayisa kulona eThekwini, ungomunye waba-hwebi abakhala ezimathonsi ngokuphazanyiswa komsebenzi wabo
yimibhikisho eyaqalwa ngabalandeli bakaMnu Jacob Zuma.
BAKHIHLA isililo esihambisana nesibibithwane osomabhizinisi abahweba emigwaqweni, ikakhulukazi yamadolobha amakhulu KwaZulu-Natal naseGauteng, ngenxa yokubulawa yindlala eda-lwe yimibhikisho enodlame eyaqa-lwa ngabalandeli bakaMnu Jacob Zuma owayengumengameli wase-Ningizimu Afrika, benengwa wukugqunywa kwakhe ejele ngecala lokudelela iNkantolo yoMthethosisekelo.
Le mibhikisho igcine iholela ekutheni kushiswe izitolo, amafemu nezinye izakhiwo, abantu bazitapela izimpahla ezitolo okuholele ekutheni kushaye umoya emigwa-qweni abahwebi abasebenzela kuyona.
neLANGA, bathi isimo sibi kakhulu njengoba abantu abaningi besemakhaya, bengayi emisebenzini ngenxa yalolu dungunyane.
UNkz Wendy Nxele odayisa
ukudla eWorskshop, eThekwini, uthi waphelelwa wumsebenzi ngonyaka odlule, isimo sinzima kakhulu kuyena njengoba eziphilisa ngokudayisa. Utshele ilanga ukuthi imali ayithola ngokudayisa yiyona ondla ngayo umndeni.
“Ngangisebenza kwesinye isitolo esidayisa ukudla eThekwini, okwathi ngonyaka odlule kuvalwa izwe ngenxa yoCovid-19, ngadilizwa. Ngabona kungcono ukuvula indawo yokudayisa. Konke bekuhamba kahle nemali ngiyibona ngoba ngifundisa ingane ngayo futhi ngiyakwazi nokwenza ezinye izinto ezidingekayo ekhaya.
“Kuthe uma kuqala lezi zigameko zokubhikisha kwabantu, kwaphoqa ukuba nami ngingavuki ngiyodayisa ngoba abantu bebenodlame. Ngilimele kakhulu, ngisho ngingavula manje, abantu kabekho kanti nezitolo esithenga kuzona ukudla esikudayisayo zivaliwe, okubalwa nemakethe,” kusho uNkz Nxele.
UNkz Mbali Nxumalo odayisa obhasikidi nezimbadada eThekwini, uthi isimo sibi kakhulu.
“Isimo siqale ukushuba
ngoMgqibelo owedlule ngoba sava-liswa amatafula ethu, saxoshwa. Kwathi sekusuka imibhikisho, kwacaca ukuthi ngeke sisakwazi ukubuyela siyodayisa.
“Iningi labantui abathenga kithina ngabasuke beya emsebenzini, kanti izivakashi zithenga obhasikidi. Kusekude ukuba sithole izivakashi ezizothenga umsebenzi wethu njengoba isimo sinje. Kumanje ekhaya KwaMhla-buyalingana balindele ukuba ngithumele imali,” kusho yena.
UMnu Sipho Mkhize weConcer-ned Informal Vendors, uthe isimo sisazoba nzima kakhulu kubahwebi basemigwaqweni njengoba besabhekene nenye inkinga yezi-mvume.
“Njengoba isimo sinjena, abadayisa imifino ngeke bakwazi ukuqhubeka njengoba ngisho imake-the ivaliwe. Abantu bazogcina bedla kwayona le mali yokuthenga okokudayisa ngoba balambile, akudayiseki,” kusho uMnu Mkhize. skhom@ilanganews.co.za
Previous articleUdlame nokuzitapela ezitolo kuzowuguqisa umnotho
Next articleBageqa amagula abasinde bebulawa